FAALLO:-Nabadaa Naas la Nuuga leh | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALO FAALLO:-Nabadaa Naas la Nuuga leh
FAALLO:-Nabadaa Naas la Nuuga leh
Muqdisho(SONNA)–Maanta oo ah 21-ka Septembar , waxay ku beegan tahay Maalinta Caalimiga ee Nabadda, taaso oo ay qeexday Qaramada Midoobey Sanadkii 2001-dii, waana in aan qiimeyno maalintaan astaanta u ah in dunidu u baahan tahay nabad ka aslaaxda qarammada Dunida, Ummadaha iyo Bulshooyinka dhexdooda.
Xilliga hadda lagu jiro, ummadeenna waxay baahi xad dhaaf ah u qabtaa nabad in ay hesho, kuna naalooto. Xasiloonidu waxay dalkaan ka dhacay xasilooni darro baahsan iyo maamul la’aan Tan iyo dhicitaankii dowladdi dhexe billowgii 1990-kii waxaa joogto iyo caadiba noqday xassiloni darro iyo nabad la’aan, taasi oo soo jiitaamaysay in ka badan labaatameeyo sano, waxay galaafatay nolol fara badan iyadoo gaysatay khasaaro hantiyeed oo baaxad leh.
Innagoo ka faa’idaysanayno fursadaan, waa in aan diirada saarnaa waxa ka shisheeyo amniga iyo xasiloonida oo ah horumar qaran iyo wax-u qabasho bulsho, si kastaba ha ahaatee ammni iyo xasillooni waara haddii aan la helin lama gaari karo horumar la taaban karo, misna waara.
Dadka ku nool Soomaaliya haddi aanu nahay waxaa naga luntay fursad qaali ah oo lagu hergelin lahaa barnaamijka loo yaqaan Higsashada Gaariista Yoolalka Millanyumka (Millennium Development Goals – MDGs), kuwaas oo si caalami ah loogu hishiiyay markii la saxiixay Baaqa Mallanyumka bishii Sebtambar 2000. Soomaaaliya waxaa u saxiixay Mudane Dr. Cabulqaasim Salaad Xassan, oo Madexweyne ka ahaa Dowladdii KMG ahayd xilligaasi.
Haddaba munaasabadaasi awgeed waxaa ka hadlay masuuliyiin ka kala tirsan Soomaaliya iyo Beesha Caalamka, waxaana ka mid ah Warbixin ay soo saartay UNSOM taasoo ku sheegtay in Xilli lagu wado taariikhda marka ay ku began tahay 21-ka Sebtembar in adduunka dacalladiisa laga xuso Maalinta Nabadda Adduunka, aanu dib u soo nooleyno dadaalkeenna ku aaddan wada-hadal, wada-shaqeyn, iyo dib u heshiisiin, kuwaas oo ah mabaadii’da aasaaska u ah nabadda.
UNSOM waxay kaloo xustay in Nabaddu ay ka bilaabato shakhsi kasta oo anaga naga mid ah, si wadajir ahna waxaan suurtagal ka dhigi karnaa in Soomaaliya ay ku noolaato xasillooni, ayna mar kale qabato waddada horumarka.
UNSOM waxay halku dhig u soo qaataya Ereyada heesta “Nabadaa naas la nuugo leh” waxaa ay muujinayaan in nabadda ay tahay aasaaska qaran kastaba.
Waxaa kaloo ka hadlay Guddoomiyaha Aqalka sareCabdi Xaashi Cabdullahi iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed, iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay nabadda ka qeyb qaataan, maadaama ay maanta ku asteysantahay maalinta caalamiga ah ee Nabadda adduunka 21-ka september.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi Guddoomiyaha Aqalka sare ee dalka ayaa ugu baaqay dhallinyarada inay gacan weyn ka geystaan Nabadeynta dalka, waxaana uu xusay in baaqa Nabadda ay qaataan maadaama maanta ay ku asteysantahay maalinta Nabadda Adduunka.
Munaasabaddaasi waxaa kaloo ka hadlay Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, wuxuuna sheegay in maanta oo ku beegan maalinta Nabadda Adduunka ay muhiim tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay u istaagaan xoojinta Nabadda, ayna ka hortagaan cidkasta oo carqaladeyneysa Nabadda Dalka.
Maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee Nabadda Aduunka, waxaana looga baahan yahay Ummadda Soomaaliyeed inay ku fara adeegaan nabadda, si wadajir ahna meel uaga soo wada jeestaan adkeynteeda, waxaana tii hore abwaanku ugu heesay Nibadaa Naas la Nuuga leh.
Previous articleQaxooti Soomaaliyeed oo lagu xiray Yemen
Next articleShirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay Mowqifka Soomaaliya ee Khaliijka iyo Arrimo kale